ILMADII DAGAALKA SOKEEYE! | KEYDMEDIA ONLINE
ILMADII DAGAALKA SOKEEYE!
A. M. Yusuf — Soomaaliya waa lamadegaankii jaxarka, jawrka iyo xakaarka. Carradiigacandhiigle, dagaalooge, iyo mooryaanka. Dhulkii aanooyinka. Geyigii colaadda. Hooygii hoogga, kufsiga, iyo karaamadarrida.
Dalkii goblanka, madiga, agoonka, rajayga, armalka, asaayda, abtirsiimolaaweha, loomaooyaanka — iyo oohinta. “Waddankeennu waa wadnihii jirkeenna” oo nacayb, iyo dhiig sokeeye fatahay.
Beriga maanta ah se, waxa aan dooni lahaa in aan xusuusto hooyaday, aabbahay, awowgay, ayeyday, abbaayday, abboowgay, xigaaladaydii, deriskaygii, saxiibaday — dadkii Soomaaliyeed oo idil — ee sida kaska, iyo bareerka ahayd loogu riqday. Xigtadaydii, sida turriino la’aanta lahayd, lagu rigaaxay reemidii madaafiicda. Gacalkaygii hoobtay oo aan ruux na laga caymin. Dadkii ay laayeen Koofiyad Castii iyo jabhad beeleedyadii. “Giddigiis naflaa’iga wixii gobolba meel aaday” (Ismaaciil Mire, “Gumburo”).
Duqyentii aan loo aabayeeli jirin awgeed, dad ayaa jiray ku kala irdhoobay. Gacalkaygii uu aabigu qixiyay, baylahda na uga dhigay arradka, asqada, oonka, gaajada, hawkarka, dhaxanta iyo dheelka arooyaad; — iyo dhibbanayaashii ka soo noolaan kari waayay. Dadkaas ayaa maanta mudan in aan xusuusto. Cid aan taa na ku habaaro ama ba ugu duceeyo, garan an maayo. Lixaadkaygii ayaa socod iyo gudub u diriray, socod iyo gudub na isu dabargooyay. Midigtaydii, iyo bidixdaydii ayaa is jaray. Haddii se maanta, halka wax oo aan diidan ahay uu laabtayda geli lahaa, waa hubanti, in aan sheegga Soomaalida oo idil wada nici lahaa. Ma ogi si aan hadda na u nici karo lafahayga, iyo dhiiggayga. I ma ogid; Soomaali ayaan ahay: Soomaali xumaan tirsanaya, xummaan na aan cid na la doonayn; bal se ay xumeeyeen Soomaali walaalihiis ah oo xunxun. Koodii xun iyo koodii san na, Ilaaha Weyn ba wuu og yahay iyaga. Anigu na, qaarkood waxii ay faleen, wada ogi.
Qoraalkaan waxaa Qoray: A. M. Yusuf - Wayeel@gmail.com